Ngwa ngwa igwe ọgba tum tum China nke emere na China Mepụta na ụlọ ọrụ | LangO
TKB Mold bụ onye na-emepụta ihe pụrụ iche n'ịmepụta ụdị injection ahaziri iche na ngwaahịa plastik. Ọ tọrọ ntọala na 2011, dị na Dongguan, China. Ọ dị nso ọdụ ụgbọ elu Shenzheng, na-ekpori ndụ njem dị mma. Anyị nwere akụrụngwa nhazi dị iche iche, dị ka CNC lathe, mkpọpu…
TKB Mold bụ onye na-emepụta ihe pụrụ iche n'ịmepụta ụdị injection ahaziri iche na ngwaahịa plastik. Ọ tọrọ ntọala na 2011, dị na Dongguan, China. Ọ dị nso ọdụ ụgbọ elu Shenzheng, na-ekpori ndụ njem dị mma.
Anyị nwere ngwá ọrụ nhazi dị iche iche, dị ka CNC lathe, igwe na-egwupụta ihe, igwe igwe igwe, igwe stamping, hydraulic press, injection molding machine, wdg. Anyị nwere ihe karịrị ndị injinia ise bụ ndị mara mma n'ichepụta na imepụta ngwaahịa plastik na ngwaahịa plastik, ma na-anabata mgbanwe na ọsọ ọsọ. Anyị nwere ike inye ngwọta maka ụdị injection dị iche iche siri ike na ngwaahịa plastik.
Anyị na-etinye njikwa mma mgbe niile na mbụ ma na-agba mbọ maka izu oke maka ịkpụ injection na ngwaahịa plastik. Anyị factory agafeela asambodo nke ISO 9001: 2015 àgwà management usoro, na anyị àgwà laabu na-onwem na usoro nke ngwá na ule na nnwale. Ngwaahịa anyị na-aga n'ihu dị ka usoro njikwa njikwa siri ike ISO9001: 2015 si dị. Anyị nwere ike ịnye ọrụ mmepụta otu nkwụsị site na mmepe ebu ruo na nnyefe ngwaahịa.
Hot Tags: Ngwa ọgba tum tum plastik akụkụ China, ndị na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mere na China, Ogwe akụkụ , Ngwá ọrụ nchịkwa eletrọnịkị, obere akụkụ plastik, Washer TUB Front, Plastic Injection Mold Production, Ụgbọ elu Armrest Injection Mold
Nke gara aga: Plastic injection Mold Maker
Osote: Ejikwa ụgbọ ala plastik
PC ABS Swivel Cover Factory Mere na China